Maxaa kala socotaa 7 Shakhsi oo uu midkood noqon... | POHSOMEV.COM
Maxaa kala socotaa 7 Shakhsi oo uu midkood noqon...
Adis Ababa (Caasimadda Online) - Isbahaysiga talada haya ee Itoobiya ayaa la filayaa in ay goor dhow kulmaan si ay u doortaan hogaamiyohooda xiga. Qofkaas oo noqon doona ra'isalwasaraha xiga ee wadanka. Qofka la doorta ayaa mas'uul adag qaadi doona iyadoo wadanka ay ka jiraan mudaaharaadyo rabshada wadata.
Rai'salwasaarihii hore ee itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa 15-kii febaraayo ku Dhawaaqay in uu iska casilay xilka raisal-wasaaranimada iyo gudoomiyhii xisbig EPRDF, jagadaasi oo uu hayay tan iyo 2012-kii
Balse khilaaf soo kala dhex galay isbahaysigaan ayaa adkeeyay in la saadaaliyo qofkii uu noqon lahaa ra'isalwasaaraha xiga ee dalka itoobiya.
Waa kuwaan toddobada nin oo u sharaxan jagada ra'isal wasaaraha ee itoobiya.1. Lemma Magersa
Bishiii Decembar ee la soo dhaafay waxa uu cambaareeyay dilka loo geeysanayo dadka dibedbaxayaasha ah. waxa uu sidoo kale ogolaaday in uu wadahal la yeesho ururada mucaaradaka ah.
Waxaa loo arkaa in uu yahay musharax awooda in uu mideeyo wadanka balse waxa ku adag waddadii uu u mari lahaa in uu ku farsiito kurigaasi oo mahan xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka.2. Abiy Ahmed
Waa gudoomiya xisbiga OPDO, waxaana loo arkaa in uu yahay qofka loo saadaalinayo in uu bedelo ra'isalwasaarhii hore.
Waxa uu la soo shaqeeyay Milatariga waxaa uuna gaaray jagada Colonel.3. Debretsion G Michael
Mr Debretsion waxa uu ku dhashay Shire oo ku taalla waqooyiga gobolka Tigeeryda. Waxa uu dhiganayay oo uu dhexda ku joojiyay jaamacadda Addis Ababa waxa uuna ku biiray koox hubeeysan oo ka soo hor jeedday dowladdi markaasi jirtay.
Markii dambe waxa uu aaday dalka Talyaaniga halkaasi oo uu ku soo qaatay tababar ku saabsanaa technologi-yadda. Markii uu wadanka dib ugu soo laabatayna waxa uu gobolka Tigreeyda ka aasaasay raadiye lagu magacaabo "Dimtsi Weyane".
markii isbaheysiga EPRDF uu la wareegay talada wadanka waxa loo magaacabay ku xigeenka Hay'adda Sirdoonka ee Qaranka.
Haatan waa gudoomiyaha xisbiga TPLF iyo wasiirka warfaafinta.4. Demeke Mekonen
Waa ra'isalwasaare ku xigeenka ee wadanka.
Ka hor inta uusan siyaasadda ku soo biirin waxa uu ahaa macalin. Waxaa uu soo noqday Wasiirka Waxbarshada ee dalka Itoobiya.5. Workneh Gebeyehu
Dhamaadkii sanadkii 2000 waxaa loo magacaabay wasiirka gaadidka jagadaas oo uu hayay muddo afar sanadood ah.6. Siraj Fegessa
Waa xubin ka tirsan xisbiga SEPDM oo ah xisbiga uu iska casilay ra'isalwasaarahii hore waxaana loo magaacabay gudoomiye ku xigaanka xisbiga7. Shiferaw Shigute
Waa gudoomiyaha cusub ee xisbiga SEPDM waxa uu bedelay ra'isalwasaarihii xilka iska casilay.
Dadka qaar ayaa sheegaya doorashada loo doortay in uu noqdo gudoomiyaha xisbiga SEPDM ayaa waxa ay gogol xaar u tahyay suurtagalnimada ah in uu noqdo ra'isulwasaaraha xiga ee itoobiya.- OnlineXafiiska Muqdisho-@live.com